Naseho vahoaka ny birao foibe Antananarivo
Mahazatra tokoa ny mahita ireo avy amina faritra na toerana iray mifamory. Efa tamin’ny taona 2006 no nitsangana ny fikambanana Zanaray Miraindraiky. Fikambanana tsy manao politika ary mamondrona ireo avy amin’ny foko Antesaka araka ny fiiantsoana mahazatra aza fa Tesaka araka ny fomba fiteny avy any ifotony any.
Sambany nisy fampiofanana ho an'ny mpisehatra eo amin'ny teatra
Nosokafana ny 20 desambra tamin’ny fomba ofisialy ny fampiofanana ireo mpampiofana eo amin’ny sehatry ny teatra sy ny fanamafisana fahaiza-manaon’ireo mpisehatra eo amin’ny teatra, teny Soavina (Ambanintsena).
Ny Havatsa - Upem Arivonimamo
Mikarakara Filazan-tsarin’ny Alina
Ratalata Jn Bà il y a 2 années
Imamo ve ? Tsy resak’ovy ihany no masaka ao. Tsy resaka mamo araka ny mety ifandraisan’ny olona ny anaran’ny tanana Arivonimamo. Fa hafa dia hafa no atolotry ny Havatsa-Upem hanao mba tsy hahamonamonaina ny alinao. Soraty anaty diary ary ny fotoana.
Festival des lémuriens
Message et marche vers une journée mondiale
“Lémuriens, patrimoine national, ami à protéger” tel est le slogan du Festival mondial des lémuriens que nous célébrons ce 10 novembre 2017.
7 novambra andron'ny mpanoratra afrikanina
Ny 7 novambra dia andro iraisam-pirenena ho an’ny mpanoratra afrikanina. Isan’izany ny Malagasy.
“Iny lehilahy iny” ho fanajana ny ray niteraka
Namoaka boky i Toky Baritafika Ramanankohajaina. “Iny lehilahy iny” no lohateny nampitondrainy io boky io. Nahoana re ? Tia tena va re ity tovolahy ity ? Angano sa arira no ventesiny ? Ankoatran’ity tafatafa ity dia ho hitanao anatin’ireo pejy 100 ny valiny.